Alicia Keys, celebrity, celebrity, jilaa, atariishada, atariishooyinka, music, Biography, heesaha, heesaha
Alicia Keys, magaca dhalashadaAlicia J. Augello-Cook(* 25 1981. January, Manhattan, New York, USA) waa gabayaa ah oo American ah R & B iyo naftiinna, Xisbi, biyaaniiste, soo saare, deeqbixiye iyo aktarada marmar iyo qoraaga. Alicia waa artist a caan ah ayaa iibin 28 million albums oo kali iyo ayaa ku guuleystay abaalmarino badan - afar iyo toban Grammy Awards, kow iyo toban boor Music Awards iyo saddex American Music Award.
Waxay dhashay hooyo Irish-Talyaani Terri Augello iyo aabbaha Jamaican Craig Cook ee magaalada New York, Manhattan. Terri wuxuu ahaa actor iyo caawiye shirkad sharci ah, sidaas darteed waxay ku soo korartay jawi xun oo loo yaqaan "Hell's Kitchen" oo ah guri hal qol ah. 1985, oo leh dhowr gabdhood oo kale, ayaa la siiyey fursad ay ku ciyaaraan door yar oo ka mid ah qayb ka mid ah taxanahaThe Show Cosby. Toddoba jir, waxay bilawday ciyaarta piano, waxayna ciyaartay naadiyada Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart iyo Frédéric Chopin. Afar iyo toban ayay ku soo gashay sheekadii ugu horeysay ee "Butterflyz", oo markii dambe ay ku duubtay albaabkeeda hore. Waalidkeed way jabeen markii ay wali yar yartahay, sidaa darteed hooyadeed waxa ay wax u baratay si ay u taageerto iyada oo kor u qaadeysa hibada muusikada. 2005, saxaafadda ayaa sheegtay in ay isku dayday in ay heshiiso aabbaheed.Laakiin way diideen arrintan oo waxay sheegtay in erayadeeda ay khaldan yihiin.
Iyadoo ay da'doodu tahay lix iyo toban jir waxay ka qalinjabisay "Dugsiga Farshaxanka Xirfadlaha", inkastoo la dhigey Jaamacadda Columbia oo leh deeq waxbarasho, waxay go'aansatay in ay doorbido xirfadeeda muusigga. Waxay saxeexday heshiiska demo Jermaine Duprim iyo calaamaddiisa diiwaanka So So Def. Waxay ku qortay sheekada "Dah Dee Dah (Sexy Thing)", oo u muuqday midda filimka "Ragga Black". Tani waxay ahayd tii ugu horeysay ee xirfadleyda, laakiin weligeed lama sii deyn sida hal shuruudaheeda ah oo qandaraaskeedii si degdeg ah loo joojiyay. Later, waxay la kulantay Cliff Davis, oo qandaraaskeedii la saxiixday Arista Records, laakiin markii dambe loo wareejiyay shirkadiisa duubista, J Records. Waxay ku heesay heesaha "Rock Rock Wit U" iyo "Rear View Mirror", oo u muuqday midda "Mashiinka" iyo "Dr. Dolittle 2 ". Alicia ayaa markaa sii daayay albaabkeeda ugu horeeyay ee 2001Heesaha A Minor.
Heesaha A Minor (2001)
album Tani waa maalinta ugu horeysa ee sale (5 2001. June) ka badan iibin badan oo gogo '50 000 in toddobaadka ugu horreeya ka badan oo gogo' 235 000 dunida oo dhan iyo in ka badan 12 million. Waxay xaqiijinaysaa sumcaddeeda labadaba ee Maraykanka iyo wixii ka baxsan. In dalka hooyo uu noqday sanadkii ugu iibinta ayaase 2001 (iyo sidoo kale-fiican iibinta R & B artist ah). Waxa kaliya ee ugu horeysay, "Fallin '" wuxuu ahaa lix todobaad in meesha ugu horeysa boor Hot 100. At dhacdo, "America: canshuurtiisii ​​ka go'dayna waxay A Si Heroes", riwaayad waxtarka abaabulay sababtoo ah dhacdooyinkii 11. September 2001, Alicia sameeyaa la Donny Hathaway song "Oognayd dhammaanteen waa layna doonaa Free". Midda kale, "Woman Worth," waxay timid 10 US ee ugu sareysa. Alicia in 2002 badisay shan Grammy Awards, oo ay ku jiraan abaalmarinta for Best New Artist iyo Song of Year, (waayo, gabaygii Fallin '). 22. Oktoobar 2002 ayaa sii daayay albaabDib u Dhaafay & Ka Fududay A Minor, calaamadaha caddaanka ahHeesaha A Minor, kuwaas oo siddeed seddax iyo todobo ka mid ah noocyada Alicia ee ugu horeeyay.
Dhaleeceyntu waxay ka hadasheen albaabka si habboon. Alicia wuxuu awooday inuu isku darsado codka 70. sida Curtis Mayfield, Marvin Gaye iyo Stevie Wonder, iyo dhawaaqyada cusub ee hip-hop sida Lauryn Hill, Erykah Badu iyo D'Angelo.
Xogta Alicia Keys (2003)
Waxay sii daatay albaab kaleWarqadda Alicia Keyswaxaa daabacay 2. Diisambar 2003. Albaabka ayaa lagu dhaleeceeyay oo ahaa kii ugu horreeyay ee Maraykanka. Toddobaadkii ugu horreeyay ee iibka, waxa ay iibisay 618 000, taas oo ah lixda ugu sareysa ee iibinta sanadka iyo heerka labaad ee iibka labaad ee R & B. Ilaa hadda, 9 ayaa ku iibisay malaayiin. Singles "Ma ogi My Name" iyo "Haddii Aan Heli Karin" ayaa ku galay top5 iyo hal "Qoraal" ee top10. Kalmada "Karma" kaliya waxay u samaysay meel labaatanaad ah, laakiin "40 Mainstream" ee jumladaha, waxay ahayd ilaa 3. meel. Kaliya "Haddii Aan Heli Karin" ayaa noqday kan ugu horreeya ee ku jira jaantusyadaBillboard Hot R & B / Hip-Hop Songsin ka badan hal sano, oo ka sarreysa heesaha "Ilmahaaga" by Mary J. Blige. Alicia wuxuu noqday xiddiga ugu wanaagsan ee iibiya R & B 2004.
Qiimaha on "MTV Video Music Awards 2004" ku guuleystay abaalmarinta for R & B ugu fiican video (Haddii aan sow ma aha inaad haysataa) iyo abaalmarinta this isku waxaa la guddoonsiiyey sannad ka dib for video ah "Karma". On 2005 Grammies ku sameeyaa "Haddii aan sow ma aha inaad haysataa" iyo sidoo kale ku biiray Jamie Foxx iyo Quincy Jones, oo iyana dhammaantood waxay ku gabyeen gabay ah "Georgia on My Mind", ka dhigay caanka ah by Ray Charles. Makhribkii, iyadu ku guuleysatay Alicia afar abaalmarinta iyo R Khayr & B Album, Best Vocal Performance, (waayo, Haddii aan sow ma aha inaad haysataa), Best R & B Song ( "Waxaad Ma Garanayo My Name") iyo Best Vocal R & B labada qaab ama koox, waayo, gabay "My Boo," oo ay ku hadlaan Aasheer. Qiimaha for taas oo iyadu loo magacaabay, laakiin waa mid aan jirin oo kale. Album of the Year, Song of the Year (Haddii aan Kanu sow ma aad heshay).
Loo shaqeyn (2005)
Munaasabad ka dhacday Lisbon ee 2008
14. 2005 ayaa ku ciyaaray MTV Unplugged ee Brooklyn Academy of Music. Inta lagu guda jiro Hadalkan uu ciyaaray songs ay, kaas oo ku daray taabashada kale oo la sameeyaa a versions cover yar. Dhageystayaasha waxaa ka mid ahaa farshaxanno oo ka soo qabtay xafladaan. Waxay ahaayeen heesaaga Common, Mos Def, Damian Marley oo gabayaa ahaa hogaanka Maroon Adam Levine 5 (kii la iyadu ku gabyeen gabay ah Stones Rolling The "Wild Fardaha").
Waxay sidoo kale heesay heesaha "Every Little Bit Hurts", oo mar hore heesay Aretha Franklin ama Brenda Holloway. Waxay sidoo kale sii daaysay heesaheeda cusub: "Moments Stolen," oo ay ku soo daabacday wax soo saaraha Lamont Green iyo "Unbreakable," oo ku jirtay 4. ku qor jaantusyadaboorR & B / Hip-Hop, iyo kaalinta soddonaad ee Billboard Hot 100. JaantusyadaboorRoute R & B Airplay xitaa waxaa la qabtaa kow iyo toban usbuuc markii ugu horeysay. Bandhiga oo dhan waxaa sii daayay 11. Oktoobar 2005 labadaba CD iyo DVD waxaana loo magacaabay si fududLoo rakibo. Jaantusyadaboor200 kaalinta koobaad iyo 196 000 ayaa la iibiyey todobaadkii ugu horreeyay ee iibinta. Dhanka kale, hal malyan oo doolar ah ayaa loo iibiyey isaga oo ku sugan Maraykanka. Her riwaayad Unplugged ahaa ugu horeeyay ee ugu MTV Unplugged tan Nirvana. Ayaa loo magacaabay afar Grammy Awards - Best Female Vocal R & B Performance, (waayo, la jabin karin), Performance Best Vocal - R dhaqanka & B (waayo, Haddii aan ahaa Your Naag), R Best & B Song (guulihii) iyo R fiican & album B.
Xubinta Xoriyadda (2009)
Alicia oo ka mid ah Abaalmarinta Music Music 2009
Qaybta afaraad ee studio Element of Freedom waxaa la sii daayay December 2009. Albaabka wuxuu ahaa midkii labaad ee Billboard 200 US oo 417 iibiyey kun oo nuqul todobaadkii ugu horreeyay ee iibinta. Albaankani wuxuu sidoo kale ahaa kii ugu horreeyay ee ugu sarreeya shaxda albaabka Ingiriiska.
Ku shaqeynta xirfadda
Waxay ku dhameysatay filim, oo ay ka mid yihiin Ben Affleck, Ray Liotta, Common, Andy Garcia, Jeremy Piven iyo Ryan Reynolds,Qalabka 'Smokin'. 26 ayaa ka muuqatay shineemooyinka. Janaayo 2007. Waxaa la ciyaaray dilka Georgie Sykes. Rai Reynolds ayaa sheegtay in sheekada dabiiciga ah ay tahay mid aad u qurux badneyd oo ay la yaabtay inayan waligeed ku ciyaarin filimada kahor.
Intaa waxaa dheer, waxay dhamaysay filimkeeda labaadNanny Diariesoo ay wehliyaan Scarlett Johansson. Saaxiibkii ugu fiicnaa wuxuu ahaa filimka.
Jeff Robinson oo ah maamulaha mudada fog, wuxuu saxiixay heshiis filim ah oo dib u habaynaya filimka "Bell, Book and Candle" oo ka socda 1958. Waxaa jiri doona masraxa.Wadajir ahaan Robinson wuxuu sidoo kale aasaasay shirkadda wax soo saarka teleefishinka "Big Pita".Mashruucoodii koowaad waxay noqon doonaan taxane ku saleysan Alicia xasuustiisa caruurnimada sida mulatka ku koraya magaalada New York.
In filimkaQaabdhismeedka Black iyo Whitewuxuu ciyaari doonaa gabar aad uwanaagsan oo u ciyaara kubbada cagta.Waa filin ku salaysan taariikhda sawir gacmeedka Philippe Schuyler.
Munaasabad ka dhacday Tokyo oo ku taal 2008
Waxa kale oo uu si firfircoon ugu hawlan yahay samafalka. Waa macaash doon ahayn Afhayeenka hay Child a Alive, kaas oo bixiya daawada qoysaska Afrika kuwaasi oo ay saameeyeen AIDS. Alicia ay weheliyaan diiwaangeliyey Fanaanada Bono U2 cover a of heesta "Ha Sii Up" (asal by Petera Gabriela iyo Kate Bush) on munaasabadda Maalinta AIDS-ka Adduunka ee 2006. Si kastaba ha ahaatee, waxay heleen magac yar oo kala duwan oo ah "Ha u Saarin (Afrika)". Alicia Bono iyo halkan ku jeclaan lahayd in la tilmaamo in kaliya ku nool Africa shan iyo labaatan milyan oo qof oo ay saameeyeen AIDS caalami ah oo waxaa jira afartan million.
Waxay booqatay dalal sida Uganda, Kenya iyo Koonfur Afrika si ay u taageeraan daryeelka carruurta qaba AIDS-ka. Sida safiir iyo aasaasaha aasaasiga ah ee Ilmo Ilaalintu ku noolaadaan. Waxa kale oo uu noqonayaa afhayeenka Frum Tha Ground Up charity, taas oo dhiirrigelisa oo taageerta dhalinyarada Maraykanka ah si ay guulo u gaaraan dhammaan dhinacyada. Alicia ayaa sidoo kale ka qaybqaatey dhacdooyin bini'aadaminimo oo kala duwan oo ku saabsan 2005. Bishii July, waxay ku sameysay Philadelphia Live Live 8 aduunka oo dhan. Munaasabadda xafladani waxay ahayd in lagu digo saboolnimada saboolka ah ee ka jirta waddamada Afrika iyo inay ku qasbaan wakiillada G8 in ay cafiyaan deymaha Afrika. Bishii Agoosto, 2005 waxay samaysay bandhig faaiidoReact Now: Music & Relief, oo soo bandhigta saldhigyada muusikada. Ujeeddadu waxay ahayd inay lacag u uruuriso duufaankii burburay Katrina. Hal bil ka dib, waxay tagtay masrax lacageed oo isku mid ahHoyga laga bilaabo Duufaanka: Concert for Coastal Gulf. Bishii Luulyo, 2007 wuxuu ku heestay Live Earth ee New Jersey.